10 Scenic villages MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Scenic villages MuEurope
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Nzvimbo dzakakura dzeEurope ndiko kwakabva ngano dzakawanda nengano, inoshamisa nyika uye misha inochengeta zvakavanzika zvekare. Pedyo nepakati pemaguta epasi kana akaputirwa kuseri kwemakomo emabwe, huwandu hwemamisha anoyevedza uye anonakidza muEurope haaperi. asi, pane 10 inoyevedza misha muEurope iyo runako uye mashiripiti anopfuura vamwe vese.
Rail senga ndiyo zvakatipoteredza ushamwari nzira yokufamba. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, The Akachipa Kwazvo Zvitiketi Iwe Webhusaiti Munyika.
1. Tarisa, Siwizarendi
Musha wakanaka kwazvo muSwitzerland, Guarda musha mudiki, iri pakati pe metad green. Pamusoro pezasi chikamu chemupata Engadin, kana sekudanwa kwavanoitwa nenzvimbo yacho, Engiadina anotonga epic Swiss maonero. Iyo yakavakirwa pane tara yezuva, 300 metres pamusoro pemupata, vachichengetedza vese vauya nekuuya, pamwe netsika dzekare sekudzinga chando kure.
Dzimba dzevachena dzakashongedzwa nemapendi echinyakare uye zvinyorwa zvekare zvainzi sgraffiti. Maroma, mutauro weko, izvo zvakapona uye zvichiri kutaurwa nanhasi.
Basel kuenda kuChur neTreni
Bern kuna Chur neTreni
Turin kuna Tirano neTreni
Bergamo kuna Tirano naTreni
2. Scenic villages MuEurope: Cochem, Jerimani
Musha unorara pamahombekombe erwizi rweMoselle. Dzimba dzehafu-dzakabiwa uye dzimba dzakanaka dzinovakirwa mumigwagwa yakatetepa. Kunaka pakudonha, apo makwenzi akasvibira nemiti zvichipfeka zvidyiro zvendarama, achiwedzerwa kune runako uye runotaridzika kurongedza yakaisvonaka Cochem.
Yakatenderedzwa neminda yemizambiringa uye nezvikomo, Cochem musha ndewekutumira-yakakwana. Nzira yakanakisa yekunzwa musha uye kutora ese anotaridzika emamisha kuona ndeye bhasikoro.
Frankfurt kuna Cochem neTreni
Bonn kuna Cochem neTreni
Cologne kune Cochem neTreni
Stuttgart kuna Cochem neTreni
3. Dinant, Bherujiyamu
Pakati pemawere, pamahombekombe erwizi Meuse, inogara inoyevedza musha weDinant munzvimbo yeWallonia. Mamiriro ekunze, chando, kana chitubu, musha uno unotaridzika unoshamisa mune chero mamiriro ekunze uye nguva yezuva. Maonero akanaka anotova akanaka kubva kumawere-pamusoro peCitadel.
Iyo dome yeColggiale Notre-Dame De Dinant chinhu chakakurumbira mumashure memakomo matema emabwe. Dzimba dzinoyevedza uye mabhoti pamberi, zadzisa zvinotarisisa.
Kana iwe uine imwe nguva, shanya kuCrevecoeur castle iri pedyo, Minda yeAnnevoie, uye Chateau de Veves kune mamwe maposikhadhi-akafanana nemaonero.
Brussels kune Chikafu neChitima
Antwerp kuti Kudyira ne Chitima
Ghent kune Chakudya nechitima
Kunyepa kune Chikafu neChitima
4. Scenic villages MuEurope: Norcia, Itari
Kuseri kwekudzivirira madziro, pakati pegomo rakasvibira, muEast Umbria, iwe uchaona iwo anoyevedza musha Norcia. Musha wekare uyu wakanaka uye unotaridzika chaizvo munguva yekurarira kana nzvimbo dzakaputika dzichiita maruva akanaka.
Makereke, Matumba eItaly, wedzera pakuona kunooneka kwaNorcia. wo, rwizi rweNera ndiyo imwe nzvimbo yekuongorora uye kunakidzwa nemaonero anotyisa yenzvimbo yakanaka yeUmbria muItari. Vari munzira kuve nechokwadi chekutarisira kune vakakurumbira truffles, uye ravira chikafu chemunharaunda che spaghetti kana frittata ine truffles. Zvinongova zvehuMwari!
Milan kuenda kuRoma nechitima
Pisa kuenda kuRoma neTreni
Naples kuenda kuRoma neTreni
Kana iwe uri kuenda kuHolland kunotora epic tulip minda, wobva washanyira Lisse inoyevedza. Musha uyu wakanaka 45 maminitsi kure neAmsterdam.
Lisse pamwe ndeimwe yemisha inonetesa muNetherlands, asi kumusha 7 mamaruva emaruva anodyarwa gore rimwe nerimwe muKeukenhof Gardens. Kubva pakupera kwaKurume kusvika pakati paMay, aya mababu anotumbuka kuva akanaka uye ane mavara tulips. saka, Liss hapana mubvunzo kuti ndiyo ine rudo kupfuura dzose mumatsutso uye iwe uri mune zvimwe zvisingakanganwike shoti uye maonero.
Bremen kuenda kuAmsterdam neTreni
Hannover kuAmsterdam neTreni
Bielefeld kuenda kuAmsterdam neTreni
Hamburg to Amsterdam neTreni
6. Scenic villages MuEurope: St. Gilgen, Ositiriya
Wese munhu anoziva mashiripiti Hallstatt, asi Austria musha wemumaguta akawanda akanaka uye maguta. Imwe yemamisha akaomesesa muEurope iri muAustria. St. Gilgen musha waimbove musha kumhuri yeMozart, uye musha unogara pamhenderekedzo dzeLake Wolfgang.
Unogona kuongorora musha netsoka kana bhasikoro, kana kubva kumota yekubatira. Ukasatya kukwira, ipapo maonero anozaruka kubva kune tambo yemotokari anozobvisa mweya wako kure. Maonero akanaka emusha uyu ave kurudziro kubva kuViennese artists.
Munich kuSalzburg neTreni
Vienna kune Salzburg neTreni
Graz kuenda kuSalzburg neTreni
Linz kuSalzburg neTreni
7. St. Geniuses, Furanzi
Imba kune iyo French Delicacies Foie Gras uye truffles, musha mudiki weSt. Genius ndizvo 2 maawa kubva Bordeaux. Izvi zvinovimbisa minda yemizambiringa inoyevedza yakatenderedza, uko iwe kwaigona kunakidzwa girazi rewaini yakajeka sezvaunodakadza musha wakanaka nemaruwa.
St. Genies musha une edu 10 inoratidzika misha muEurope nekuda kwekune yakakwirira padenga matombo edzimba. Pamusoro pe, the 12th-century church and 13th-century castle are right in the center of the village. Mugwagwa une mhepo unoenda unodarika nemusha uye nedzimba dzayo nhema dzematombo kusvika kune anoyevedza maonero uye masosi.
St. Genies inoratidzira firimu renguva yeFrance yakakomborerwa nayo. Unogona kunakidzwa nezvakawoneka rwendo rwechitima kuyambuka France.
Nantes kuenda kuBordeaux neTreni
Paris kuenda Bordeaux neTreni
Ryon kuenda kuBordeaux neTreni
Marseilles kuenda kuBordeaux neTreni
8. Scenic villages MuEurope: Bibury, England
Matumba emabwe ane matenga akanyorovera akasimba matema akasvibira akatenderedza ndiwo anoita kuti Bibury rive rimwe remamisha akaomesesa muEurope.. Ive nechokwadi chekufamba pasi Arlington Row, iyo inoyevedza kupfuura dzose uye yakanaka snaps.
Iko kufamba kunokutora iwe kunodzosera kumashure kuhupenyu hwepfumbamwe-zana muzana muBibleury. Musha wakanaka kwazvo muEngland unogara pamahombekombe eRwizi Coln. Iyi yaimbova nzvimbo yakanakisa yekumonera mvere kubva pamatare ezvakarukwa. Nyika dzeBhaibheri dzakanakisa kwean masikati pikicha kana mangwanani-ngwanani kufamba pamberi pemapoka evashanyi kunovhiringidza runyararo rwayo uye nehope dzinofamba.
Amsterdam kuenda kuLondon neTreni
Paris kuenda kuLondon neTreni
Berlin kuenda kuLondon neTreni
Brussels kuenda kuLondon neTreni
9. Lindau MuGerman
Lindani musha uri pamuganhu weAustria neGerman, muBavaria Germany. Iyo ndeimwe yematunhu akanaka kwazvo a kuwa zororo muEurope. Pamahombekombe eGungwa reConstance, inozivikanwawo seBodensee, musha uyu chaiye peninsula, nebhiriji rinobatanidza pakati penyika nechitsuwa.
Mamwe emafungiro anoyevedza mumusha ndewaMaximicastrasse mugwagwa, iyo yekare yekare yezana ramakore rechigumi, uyezve iro Old Town, Altstadt.
Lindau akadaro gem yakavanzika kuGermany nemusha wakakodzera chose kushanya kwako parwendo rwako runotevera. Kune maEroocity zvitima kubva kuMunich, Zurich, naStuttgart.
Berlin kuLindau neTreni
Munich kuenda kuLindau neTreni
Stuttgart kuenda kuLindau neTreni
Zurich kuenda kuLindau neTreni
10. Scenic villages MuEurope: Czech Krumlov, Czech Republic
UNESCO nhaka nyika nzvimbo, Cesky Krumlov musha muBohemia musanganiswa weRenaissance, Gothic, uye Baroque zvivakwa. Yakapindirana neRwizi Vltava, Cesky Krumlov imwe yenzizi dzakanaka kwazvo muEurope. Mufananidzo weimba iri pamabhangi ane chimiro chakanaka mumashure ndeye imwe yeakanakisa maonero muEurope. Ndicho chikonzero Cesky Krumlov ari patiri 10 nharaunda dzakanaka muEurope rondedzero.
Inokurudzirwa zvikuru kukwira kuCesky Krumlov castle kune isingakanganwiki panorama yeCesky Krumlov, Vltava rwizi, uye hunaku hunhu hwakakomberedza nzvimbo yeBohemia.
Nuremberg kuPrague neTreni
Munich kuPrague neTreni
Berlin kuenda kuPrague neTreni
Vienna kuti Prague ne Chitima
Scenic villages MuEurope
Misha mishoma yemifananidzo inoyevedza muEurope yakavanzika kure nemazhinji evashanyi mumakomo makuru. Aya matombo akavanzika anogona kutaridzika senge asinganetsi, asi nehunyanzvi wanhasi, vari pedyo kupfuura kare. Unogona musha wese na mabhazi, parwendo rurefu rwechitima kuEurope. Mumumaawa mashoma chete iwe unogona kunge uchidzungaira uchitenderera, kuyemura nekupfura mifananidzo yeiyi yakavanzika tsika uye maonero.
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvetiketi matikiti kune chero eaya akanaka nzvimbo eEurope.
Uno tinoda kubatanidza yedu blog post ”10 Scenic villages MuEurope”Pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/ ‎– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Zh-CN to / ja kana / of uye mimwe mitauro.
beautifuldestinations beautifulvillageseaurope Fairytaletowns scenicvillageseurope misha